Dhageyso:-Taliyaha xoogga oo Al-Shabaab ku eedeeyay Saraakiishii la dilay | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Taliyaha xoogga oo Al-Shabaab ku eedeeyay Saraakiishii la dilay
Dhageyso:-Taliyaha xoogga oo Al-Shabaab ku eedeeyay Saraakiishii la dilay
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Janeraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa si kulul uga hadlay saraakiishii Maalin ka hor lagu laayay weerarkii ka dhacay duleedka degmada Balanballe ee Gobolka Galgaduud.
Taliye Odawaa ayaa sheegay in Ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay dilka saraakiisha Ciidamada, isla markaana uu rajeynayo in gacanta lagu soo dhigo.
Taliyaha waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in dilkaas aan lala xiriirin karin Arrimo qabiil, hayeeshee ay ka dambeeyaan Al-Shabaab oo horay dalka uga geystay weeraro iyo qaraxyo ay ku waxyeeloobeen mas’uuliyiin dowladeed & Shacab.
Marka laga soo tago hadalka Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Janeraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli warar soo baxayay ay sheegayeen in dilka Saraakiisha Ciidamada xoogga dalka loogu geystay Gobolka Galgaduud ay la xiriirto aano qabiil oo waayadaan ka jirtay degaannada Galmudug.
Previous articleWafdi ka socda Qaramada Midoobay oo gaaray degmada Dooloow
Next articleHanti dhowraha oo shaaca ka qaaday lacago la la’yahay iyo xaalka Villa Somalia